सेनिटरी प्याडमा चलखेल - News Today
सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा पनि सेनिटरी प्याडमा चलखेल भएको समाचार आएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा लाखौंको सेनिटरी प्याड खरिद गरी चलखेल भएको हो ।
खरिद गरिएको प्याड मध्ये आंशिक रुपमा बितरण गरिएपनि विवरणमा पुरै रकम उल्लेख गरी चलखेल भएको हो । कूल २३ हजार प्याड खरिद भएको देखाईएकोमा ९ हजार ६ सय २४ प्याकेट मात्र बितरण गरिएको समाचारमा उल्लेख भएका कारण बाँकी प्याड के भयो ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
उता महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनले खरिद गरिएको भनिएका प्याड बितरण वा सार्वनिक नगरिएका कारण खरिदमा ठूलै चलखेलको आशंका छ । लामो समयसम्म मौज्दातमा राख्दा प्याड प्रयोगयोग्य नरहने भएका कारणले पनि यदि त्यस्तो अवस्था आए बजेटको विनाश मात्र हुने कुरा नकार्न मिल्दैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनले प्याड खरिदको ठेक्का पाएको कम्पनी वा ठेकेदारलाई कारबाही गरी ६ लाख ७६ हजार आठ सय आठ रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
जनताकालागि विकासीय काममा खर्च गर्नु पर्ने बजेटको यसरी दोहन गरिन्छ भने यस्तो कामलाई उचित कसरी भन्न सकिएला ? उसै पनि स्थानीय तहहरुले बजेटको अभाव देखाएर गर्नै पर्ने अत्यावश्यक विकास निर्माणको काम पनि गर्न नसकिएको बताउने गरेका छन् । यसले गर्दा जनताले चाहिँ अनेक प्रकारका समस्याको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।
उता भएको बजेटको चाहिँ यसरी दोहन गर्ने काम हुन्छ भने यस्तो तरिकाबाट स्थानीय तहहरुले जनभावना अनुसारको काम गरेको कसरी मान्न सकिएला ?
Previous : हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा सेनिटरी प्याड खरिदमा चलखेल
Next : कल्याणपुरमा बसको ठक्करबाट एक ४५ बर्षीया महिलाको मृत्यु